Xaqiiqa Times Oo Sanad Jirsaday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Aqoon Guud Xaqiiqa Times Oo Sanad Jirsaday
Xaqiiqa Times Oo Sanad Jirsaday
Marka hore naga guddoon hambalyo ka timid bahda Xaqiiqa Times oo u dabbaal-degaysa sanad-guurada koowaad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay wargeyska. Caddadkii ugu horreeyay wuxuu soo baxay koowdii bishii Luulyo sanadkii 2014. Waxaa soo saaristiisa lagu beegay maalin qaran oo qiimo badan oo dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan ay xusayaan 54 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay xoroobeen, oo ay midoobeen goballada waqooyi iyo kuwa koonfur ee Soomaaliya oo ay kala gumaysan jireen Ingiriis iyo Talyaani.
Yuusuf Xasan oo ah tifaftiraha guud ee Xaqiiqa Times, isla markaana ah aasaasaha wargeyska ayaa isagoo ka hadlayay sanad-guurada wuxuu sababta uu u doortay inuu maalintaas ku beego tirsigii ugu horreeyay ee wargeyska ku tilmaamay in Koowda Luulyo ay tahay maalin ku weyn Soomaalida oo astaan u ah xorriyadda iyo midnimada ummadda. “Wargeysku wuxuu xoogga saaraa madax-bannaanida, midnimada iyo qarannimada Soomaaliya” ayuu yiri “sidaas darteed ayay muhiim u noqotay in caddadkii ugu horreeyay aan ku beegno 54 jirkii xornimada Soomaaliya.”
Dhowrista danta guud, qarannimada, sinnaanta, u hiillinta dulmanaha, shaacinta runta, taageeridda horumarka, sharciga iyo caddaaladda, madax-bannaanida ummada, diinta, xuquuqda aadanaha, dhaqanka, afka, difaaca dhulka hooyo bad iyo berriba iyo inuu bulshada uga digo halisaha, waa ujeeddooyinka loo aasaasay wargeyska Xaqiiqa Times oo tirsigiisan uu galay sanadkii labaad.
Wargeyska looma aasaasin inuu wararka maalinlaha ah dadka u soo gudbiyo, balse sida aad caddadyadiisii soo baxay ka arki karto wuxuu xoogga saaraa inuu ka sheekeeyo horumarka laga sameeyo Soomaaliya (gaar ahaan dhinacyada dib-u-dhiska, ganacsiga iyo maalgashiga), guulaha la gaaro ayuu daaha ka qaadaa, wuxuuna si cilmiyeysan u falanqeeyaa dhacdooyinka ka jira geyiga Soomaaliya ee saameynta ku leh nolosha bulshada.
Waa meel laga soo dhaweeyo aragtiyada kala duwan. Wuxuu fursad siiyaa aqoonyahannada iyo dadka ay xirfaddooda tahay inay wax qoraan. Wuxuu u yahay gole ay farriintooda iyo fikradahooda wax dhisaya dadka ku gaarsiin karaan. Si gaar ah wuxuu u dhiirrigeliyaa dhallinyarada warbaahinta Soomaalida ku jirta ee jecel inay wax qoraan. Hadafku waa inuu akhristaha ka macaasho duxda qalinka qoraaga Soomaaliga ah ee aqoonyahanka ah, ee waaya-aragga ah, ee indheergaradka ah ee xirfadlaha ah ee jecel dalku inuu xasilo oo horumaro, sharciguna uu shaqeeyo oo nidaam iyo kala dambeyn la hirgeliyo.
Dhallinyaro badan oo wax noo soo qortay waxay sheegeen inuu wargeyska ku abuuray yididdiillo ah inay far-Soomaali wax ku qoraan. “Waa soo nooleeyaha af-Soomaaligii oo sii dhimanaya.” ayuu yiri mid ka mid ah dhallinyaradaas.
Akhrintu wax bay ku bartaa, waxay kobcisaa garaadka, waxay kugu hoggaamisaa nolol cusub, hal-abuur iyo kasmo dhammeystiran.Wargeysku wuxuu aaminsan yahay inuu akhrisku ka mid yahay sababaha horseeda guusha aadanaha iyo in la fikiro oo dadku ay cilmi iyo caqli siyaadsadaan, wuxuu ka soo horjeedaa marmarsiyada halbeegga looga dhigo Soomaalida ee lagu tilmaamo inay yihiin ‘dad hadla oo aan waxba akhrin’.
Yuusuf Xasan, aasaasaha Xaqiiqa Times ayaan waydiinnay isagoo heli kara inuu maalgashado qeybaha kale ee warbaahinta, waxa uu ku doortay inuu wargeys soo saaro wuxuu yiri: “Waan heli karay inaan idaacad ama telefishin aasaaso. Iyagaa khasash yar oo ganacsi ahaanna wax laga heli karaa. Laakiin, waxaa I dhibtay oo aad ii damqisay sida loo dayacay qoraalka farta hooyo iyo inay yaraadeen qoreyaasha daneynaya inay far-Soomaali wax ku qoraan. Maamaama aan ku takhasusay warbaahinta la daabaco waxaan go’aansaday intii aan cid kale eedda dusha ka saari lahaa inaan aniga arrintaas mas’uuliyaddeeda qaado oo aan soo saaro wargeys tayeysan oo far-Soomaali wax ku qora oo ilaaliya tiirarka ay ku taagan tahay qarannimada oo af-Soomaaliga uu koow ka yahay, la’aantiisna aanay jiri karin madax-bannaani iyo qarannimo.”
Yuusuf tallaabadaas Alle wuu ku guuleeyay, waxaana u suuragashay inuu sanadkii la soo dhaafay soo saaro wargeys labadii toddobaadba mar soo baxayay oo tusaale wanaagsan u ah wargeysyada kale ee dalka ka soo baxa.
Mid ka mid ah tiirarka loo aasaasay wargeyska waa inuu tusaale u noqdo sida ugu wanaagsan ee loo qoro, waxna loogu faafiyo af-Soomaaliga. Inta badan warbaahinta hadda shaqeysa ee Soomaalida iyo dadka ka howlgala waxaa lagu dhaliilaa in aysan xil iska saarin sixista dhigaalka Soomaaliga. Xaqiiqa Times wuxuu af-Soomaaliga u arkaa inuu yahay astaan qaran oo dhaxal u ah ummadda. Wuxuu wax u qoraa sida ugu saxan uguna quruxda badan ee laga doonayo warbaahinta la daabaco.
Waxaa wax lagu faani karo ah in Wargeyska Xaqiiqa lagu qotomiyay hab warbaahin oo asal ah, oo dhexdhexaad ah, oo run sheeg ah, oo isku dheellitiran, oo sharciga iyo anshaxa u hoggaansan, oo dadka oo dhan ay u siman yihiin, oo wax lagu dhisayo, oo cod siinaya dadka aan codka laheyn, wuxuuna si isku mid ah u dhowrayaa xuquuqda muwaadiniinta.
Wuxuu u soo baxaa qaab xirfadeysan oo la mid ah wargeysyada caalamiga ah oo farshaxan iyo qurux ay ka muuqato oo qof kasta oo Soomaali ah uu jecleysanayo, kuna faani karo, waana kan keliya ee noociisa ah ee ka soo baxa Soomaaliya, xaruntiisuna ay tahay Muqdisho.
Dadka qaar midabka iyo naqshadda ayay ka heleen, qaar waxay ka heleen qoraallada aan sameyno, qaarna mawaadiicda aan ka hadalno iyo faallooyinka aan daabacno. “Waa nooc bilicsan oo tayo leh oo marka aad akhrisaneyso ku farxad-gelinaya” ayuu yiri akhriste ku taxan wargeyska. Akhriste kale wuxuu Xaqiiqa ku tilmaamay waa cusub oo u baryay warbaahinta la qoro.
Wargeyska muddadii sanadka ahayd ee uu soo baxayay horumar weyn ayuu gaaray, aad ayaana looga soo dhaweeyay Soomaalida dhexdeeda, “inuu horay u sii socdo oo taageereyaal badan uu helo ayaan rajo weyn ka qabnaa” ayuu yiri Yuusuf Xasan.
Tifaftiraha guud wuxuu ku taamayaa soo-saarista wargeyska inaysan ku koobnaan qeybta far-Soomaaliga ku qoran, balse uu soo saaro mid Ingiriis ah iyo mid kale oo Carabi ah.
Bog internet oo wargeyska uu leeyahay ayaa jira, kaas oo ah xaqiiqatimes.com, halkaas oo aad ka heli karto caddad kasta oo la soo saaray oo dijitaal ah iyo qoraalladii ku soo baxay oo sawirradooda wata.
Howl haddii loogu dhabar adeygo sida loogu dhiirraday billowgeeda waxaa hubaal ah inay miro-dhal noqoneyso. Dadnimadeenna, dhaqaalaheenna, aqoonteenna, waaya-aragnimadeenna iyo hal-abuurkeenna annagoo isu geyneyna oo kaashaneyna qof kasta oo Soomaali ah oo hadaf qarannimo oo wanaagsan leh waxaa naga go’an inuu mar kasta taagnaado calanka wargeyska. Wargeysyadu waa hooyada warbaahinta.
“Waxaan u mahadcelineynaa shirkadaha waaweyn ee ganacsiga sida; Jubba Airways, Salaam Somali Bank, Hormuud, Jubba Express iyo Jasiira Hotel oo la’aantood aanay Xaqiiqa sidaan habsamida leh u socoteen.” ayuu yiri Yuusuf.
Maamulka iyo howlwadeennada Xaqiiqa Times waxay hambalyo u dirayaan shacabka Soomaaliya, gaar ahaan akhristeyaasha ku xiran wargeyska oo suurtageliyay inuu maanta sanad jirsado, waxaana rajeyneynaa sanado badan inaan sidaan u wada xusno annagoo horumarnay dalkeennana uu nabad iyo barwaaqo gaaray.
Previous articleArdaygu Waa Dhibbanaha Xarig-jiidka Dowladda & Dalladaha
Next articleGobannimo Mise Gunnimo: Xornimada Soomaaliya 55 sano kadib